Fursada Salah ee markii seddaxaad uu ku guuleysan karo gool dhalinta ayaa kor u kacday… – Hagaag.com
Fursada Salah ee markii seddaxaad uu ku guuleysan karo gool dhalinta ayaa kor u kacday…
Posted on 25 Juunyo 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Xiddiga reer Masar ee Mohamed salah ayaa ku sii socda jidkiisa ku aaddan hanashada riyadiisa oo ah in magaciisa lagu qoro waraaqo dahab ah taariikhda Ingiriiska ee Premier League, ka dib markii uu soo taabtay shabaqa intii lagu guda jiray ciyaartii ay kooxdiisa Liverpool uga badisay 4-0 kooxda Crystal Palace shalay, Arbacadii, wareega 31aad ee tartanka.
Salah ayaa kor u qaaday rasiidkiisa ama tirada goolashiisa ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan isagoo leh 17 gool, wuxuu la wadaagaa booska labaad ee liiska gooldhalinta xiddiga heerka caalamiga ah ee dalka Gabon Pierre-Emerick Aubameyang oo Arsenal u ciyaara, waxay labo gool ka hooseeyaan Jamie Vardy xiddiga Leicester oo hogaanka haya.
“Boqorka Masar” ayaa wuxuu ku riyoonayaa inuu noqdo ciyaaryahankii seddexaad ee taariikhda Ingariiska ee ku guuleysta abaalmarinta gooldhalinta seddex xilli ciyaareed ee isku xigta, ka dib markii sidaasi ay sameeyeen labada ciyaaryahan sida Alan Shearer oo reer Ingriis ah oo u soo ciyaaray Blackburn Rovers iyo Newcastle United iyo Thierry Henry oo reer France ah oo u ciyaari jiray Arsenal.
Waxa kor u qaadaya awooda Salah ee ah inuu riyadan u rogo xaqiiqo ayaa ah in Vardi iyo Aubameyang ay ka guurayaan heerkoodii caadiga ahaa, iyo awoodoodii goolal la’aaneed ee labadii kulan ee ugu dambeysay ee kooxahooda tan iyo markii tartanku dib u bilaabmay bishan kadib markii la joojiyay bishii Maarso ee la soo dhaafay sababo la xiriira cudurka Corona.
Inkastoo uu weeraryahanka Manchester City Sergio Aguero, oo ku jira kaalinta seddexaad ee gooldhalinta oo leh 16 gool, hadana waxaa adag inuu ku guuleysto gool dhalinta, ka dib markii uu dhaawac ka soo gaaray jilibka, halka xiddiga Southampton Danny Ings, oo sidoo kale dhaliyay 16 gool, ayaa loo tixgelinayaa Mid ka mid ah tartamayaasha gool dhalinta ee ugu adag xilli ciyaareedkan.
Sadio Mane oo reer Senegal ah iyo Raul Jimenez oo reer Mexico ah oo ay u kala ciyaaraan Liverpool iyo Wolverhampton ayaa leh min 15 gool oo ku wada jira kaalinta afaraad ayaa ka mid ah kuwa dagaalka ugu jira guushaasi.
Salah ayaa loo caleemo saaray gooldhaliyaha ugu sareeya Premier League xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay ee Liverpool (2017-2018) isagoo dhaliyay 32 gool, isagoo noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan hal xilli ciyaareed tartamada tan iyo markii laga dhigay 20ka koox halkii ay ka ahaayeen 22 koox.
Xilli ciyaareedkii 2018-2019, Salah ayaa mar kale ku guuleystay gooldhaliyaha ugu sareeya tartanka, isagoo la qeybsaday Aubameyang iyo Mane waxay wada dhaliyeen min 22 gool midkiiba.
Weli Salah wuxuu heystaa fursad aad u fiican, isaga oo laga yaabo inuu dhaliyo goolal hor leh todobada kulan ee u hartay kooxdooda tartanka horyaalka sanadkan, ka dibna ay xoogeysato fursadiisa ah inuu helo abaalmarinta kabaha Dahabka ah.
Toddobada kulan ee u hartay Liverpool tan ugu horeysa ayaa ah kulanka ay la dheeli doonaan Manchester City, oo ku jirta kaalinta labaad ee kala horeynta, ciyaartaasi ayaa la qaban doonaa labada bisha July ee soo socota.